Mumiriri wemakore mashanu muratidziri Alice Jacob ari kudzidza achiri mudiki kuti kumira pane zvaunotenda kunogona kuita musiyano.
Vakadzi vanosarudza sei hembe?
Nepo kumhanya kwebasa kuri kukurumidza, hupenyu hwedu huri kuwedzera kuve hune mavara. Naizvozvo, pane sarudzo yemachira ekushanda, hatifanire kunge takazara sepakutanga, asi tinofanirwa kuve nerupo uye tisarasikirwe nehunhu hwechikadzi, hwakanaka uye hatishaye runako rwechikadzi; Mudiki uye akanaka, sim ...